नेपाल आज | अन्तर्राष्ट्रिय भाषाको ‘हब’ बन्दै चीन ( भिडियोसहित )
भिडियो Breaking News कभर स्टोरी अन्तरवार्ता
अन्तर्राष्ट्रिय भाषाको ‘हब’ बन्दै चीन ( भिडियोसहित )
व्यापार र भाषाको प्राथमिकतामा भारत
नेपालमा चिनियाँ उत्पादनको गुणस्तरबारे एउटा भनाइ छ– ‘मेड ईन चाइना, आज छ भोलि छैन । ’
पछिल्लो समय अर्को कुरा पनि सुन्न पाइन्छ ‘चीन संसारको अति विकसित, समृद्ध र शक्तिशाली राष्ट्रका रुपमान्तरण भइसक्यो । ’
चीनको हनान विश्वविद्यालयमा ‘भिजिटिङ प्रोफेसर’ का रुपमा कार्यरत नेपाली नागरिक भरत शर्माका अनुसार दुवै भनाइ सत्य हुन् । पहिलो उक्तिमा फरक के मात्र हो भने चीनले फरक–फरक देशमा फरक–फरक सामान पठाउँछ । चीनले अमेरिका, जापान, भारत तथा नेपालमा पठाउने सामानको गुणस्तर फरक हुन्छ । सम्बन्धित देशका ग्राहकको क्रय शक्ति हेरेर उसले मूल्य निर्धारण गर्छ । अझ स्पष्ट भन्नु पर्दा सम्बन्धित देशका व्यापारीले जस्तो सामग्री माग गर्छन्, त्यही अनुसार उत्पादन र आपूर्ति हुन्छ ।
यो हिसाबले हेर्दा नेपालमा आपूर्ति हुने लत्ताकपडा, खाद्यान्न होस वा अन्य सामग्री सबै नेपाली व्यापारीको माग अनुसार नै भैरहेको छ । सस्तो सामग्रीको माग गरिएपछि गुणस्तर पनि कमजोर नै हुने शर्मा बताउँछन् । अन्य, देशमा जाने सामग्री पनि त्यस्तै हो, त्यहाँका व्यापारीको माग अनुसारको गुणस्तर कायम गरी पठाउने गरिन्छ ।
जहाँसम्म चीन शक्तिशाली राष्ट्र बन्यो भन्ने कुरा छ, त्यो एकदम सही हो । तर, चीन कसरी विकसित भयो त ? भन्ने कुरा चाहिं बढी महत्वपूर्ण हो ।
यसको पछाडि एउटा मात्र उदाहरण काफी छ । अहिले चीनले आफनो भाषाबाहेक विदेशी भाषाप्रति निकै चासो दिएको छ । उसले आफना नागरिकलाई मुख्यतः अंग्रेजी, हिन्दी, नेपाली र संस्कृत भाषा सिकाउन ठूलो परिश्रम गरिरहेको छ । अन्य देशका भाषा सिकाउन पनि उसले औपचारिकरुपमै थालनी गरिसकेको छ ।
हनान विश्वविद्यालयमा मात्रै ४६ भाषाको पढाइ हुने गरेको छ । यो सबै विश्वव्यापीकरणको प्रभाव हो । आफनो देशको विकास गर्न विदेशी कला संस्कृति, त्यहाँको नीति, नियम, कानुन सबै जान्नु पर्दछ । यसमा चीन निकै गम्भीर छ । अझ कुटनीति क्षेत्रका अधिकारी र कुटनीतिमा रुचि भएका नागरिकलाई त चीनले सम्बन्धित भाषा सिक्न अनिवार्य नै गरेको छ ।
चीनका विभिन्न विश्वविद्यालयमा नेपाल र भारतका प्राध्यापक बढी छन् । शर्मा भन्छन्– ‘म आफै स्नातक र स्नातकोत्तर तहका विद्यार्थीलाई नेपाली, संस्कृति, अंग्रेजी र हिन्दी पढाउँछु । चिनियाँ नागरिक मज्जाले नेपाली, संस्कृत, हिन्दी र अंग्रेजी पढ्न, लेख्न र बोल्न सक्छन् । यसबाट मेरो कमाइ पनि राम्रो भएको छ । ’
पछिल्लो समय चीनले हिन्दी भाषालाई बढी महत्व दिएको छ । भारतसँगको बढ्दो व्यापारलाई मध्यनजर गरेर उनीहरुले हिन्दीलाई प्राथमिकता दिएका हुन् । हिन्दी भाषा सिकाउन र त्यसको पढाइ गर्न भारतीय प्राध्यापक चीनमा प्रशस्त छन् ।
शर्मा भन्छन्– ‘धार्मिक ग्रन्थ महाभारत, रघुवंश, गीता लगायतका पुस्तक चिनियाँ भाषामा अनुवाद भैसकेका छन् । अझ थुप्रै भारतीय धार्मिक ग्रन्थ र पुस्तक पनि चिनियाँ भाषामा अनुवाद गरिदैछ । चीनका विभिन्न शहरमा हिन्दी फिल्म प्रदर्शन गर्ने क्रम बढेको छ । यसबाटै थाहा हुन्छ, हिन्दी र संस्कृति साहित्यलाई उनीहरुले कसरी हेरेका छन् । ’
चिनियाँ शासक र सर्वसाधारण चिनियाँ नागरिक दुवैको नेपालप्रति अथाह प्रेम देखिन्छ । शासकहरुको एउटै चाहना भनेको चीनविरुद्ध नेपाली भूमि प्रयोग नहोस भन्ने मात्रै हो । नेपालको विकास र स्थिरता नै उनीहरुको चाहना हो ।
सर्वसाधारण नागरिकको भने यहाँका प्राकृतिक तथा सांस्कृति सम्पदाप्रति ठूलो स्नेह र चासो छ । उनीहरु नेपालको प्राकृतिक सौन्दर्य र सांस्कृतिक सम्पदाहरु पटक–पटक अवलोकन गर्न चाहन्छन् । नेपालका लागि पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि यो भन्दा सुखद पक्ष के हुनसक्छ !
युवा ज्योतिषीका रुपमा समेत प्रख्यात शर्माले नेपालमा २०७६ सालमा ठूलो उथलपुथल हुन्छ भन्ने भविष्यवाणी हावादारी भएको बताए । उनले वर्षको अन्त्यमा राजनीतिक दलहरुबीच केही तनाव देखिने र त्यसले मुलुकलाई केही संकटतर्फ लाने देखिए पनि राजसंस्था फर्किने, सेना सक्रिय हुने भन्ने कुरा हावादारी भएको बताए ।
उनले राज्य सत्ताको प्रमुख स्थानमा बसेकाहरुलाई बोलीमा संयमता राख्न पनि सुझाव दिए ।